पिपल्स च्वाईस अवार्डको मनोनयनमा गौरिका, अरुणा, सदिना, साबित्रा र मन्डेकाजी – Talking Sports
पिपल्स च्वाईस अवार्डको मनोनयनमा गौरिका, अरुणा, सदिना, साबित्रा र मन्डेकाजी
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी चार स्वर्ण पदक बिजेता गौरिका सिँह, दोहोरो स्वर्ण बिजेता मण्डेकाजी श्रेष्ठ, महिला बास्केटबल टोलीकी कप्तान सदिना श्रेष्ठ, भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही र फुटबलर साबित्रा भण्डारी एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् ।
पहिलो पटक अनलाइन भोटिङ्गमार्फत बिजेता घोषित हुन गइरहेको यस बिधामा पाँचै खेलाडी दक्षिण एसियाली खेलकुदकै प्रदर्शनको आधारमा मनोनयनमा परेका हुन् । स्विमर गौरिकाले दक्षिण एसियाली खेलकुद इतिहासकै सवोत्कृष्ट खेलाडी बन्ने क्रममा नेपालमा सम्पन्न प्रतियोगितामा चार स्वर्ण जितेकी थिइन् । यसो गर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् ।
कराते खेलाडी मण्डेकाजीले एकल काता र टिम कातामा स्वर्ण जितेका थिए भने सदिन र अरुणाको नेतृत्वमा नेपाली महिला बास्केटबल र भलिबल टोली इतिहासमै पहिलो पटक दक्षिण एसियाली खेलकुदको फाइनल पुगेको थियो । सावित्राकै उत्कृष्ट प्रदर्शनको मद्दतमा नेपाल पोखरामा सम्पन्न महिला फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
पिपल्स च्वाइस अवार्ड मञ्चले बर्षेनी गर्दै आएको नेपालकै प्रतिष्ठित खेलकुद पुरस्कारको ८ बिधा मध्येको एक हो । मञ्चले बर्ष खेलाडी महिला, पुरुष, युवा, बर्ष प्रशिक्षक, पारा एथ्लिट, स्पेसल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड सहितका बिधाहरुमा खेलाडी तथा खेल व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण ६ महिना पछाडी धकेलिएको यो अवार्ड यस बर्ष भर्चुवल रुपमा पौष २८ गते सातदोबादोस्थित कराते हलमा हुदैछ ।
मञ्चले पिपल्स च्वाइस अवार्डका लागि पहिलो पटक नेपालकै लोकप्रिय बिधुतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई–सेवालाई भोटिङ्ग पार्ट्नर बनाएको हो । यसअघि मञ्चको भोटिङ्ग पार्ट्नरमा टिएचटी लाइभ रहदै आएको थियो ।
डिजिटल पेमेन्ट पार्ट्नरको रुपमा ई–सेवा र मञ्चले शुक्रबार नै एक सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता पत्रमा मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओली र ई–सेवाका सिओओ रोशन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सँम्झौता पत्र साटासाट गर्दै मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओली र ई–सेवा सिओओ रोशन लामिछाने, साथमा मञ्चका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जिव शिल्पकार ।
ई–सेवासँगको सम्झौतापछि यस पटकको मनोनयनका लागि एसएमएस गर्न नपर्ने भएको छ । भोटिङका लागि ई–सेवाको एप्लिकेशन डाउनलोड गरी आफूलाई मनपर्ने खेलाडीको प्रोफाइलमा गएर भोट गर्न सकिने छ । शुक्रबार देखिनै शुरु भएको भोटिङ्ग पौष २७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि रहनेछ ।
विगतमा जस्तै उत्कृष्ट पुरुष, महिला, पिपल्स च्वाइस तथा प्रशिक्षक विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने अन्य विधाका विजेताले ५० हजार रुपैयाँसहित गिफ्ट ह्याम्पर पाउनेछन् ।
“हामी बागमती प्रदेशलाई टोलीको रुपमा व्यवसायिक हिसाबले अगाडी बढाउन तत्पर छौं । खेलाडीहरुको बिमा गरिनु र उनीहरुलाई राम्रो प्रदर्शनका लागि हौसला बढाउन नगद पुरस्कार घोषणा गर्नु व्यवसायिकतातर्फको एक कदम पनि हो । हामी प्रदेशका खेलाडीहरुलाई व्यवसायिक रुपमा खेलाउन अझै अन्य कामहरु पनि गर्नेछौं,” बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष राजु बस्न्यातले क्रिकेटिङ्गनेपाललाई भने ।
अष्ट्रेलियन बिग ब्यास लिग अन्तर्गत आफ्नो १०औं खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने सम्मिलित होबार्ट हरिकेन्सले पर्थ स्कोचर्सको सामना गर्दैछ । पर्थमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार २:०० बजे सुरु हुनेछ ।
भारत यस्तो क्रिकेटिङ्ग राष्ट्र हो जहाँ एक से एक ब्याट्सम्यानले जन्म लिने गर्दछन् । सचिन तेन्दुलकर, सुनिल गाभस्कर, राहुल द्रविड जस्ता ब्याट्सम्यानले भारतलाई सिँगो क्रिकेटलाई नै उचाइमा पुर्याए । पछिल्लो
समय भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले यस्तो प्रदर्शन दिदै आइरहेका छन्, जुन प्रदर्शन हेर्दा उनले सचिनको थुप्रै किर्तिमान भंग गर्ने देखिन्छ र गरिरहेका पनि छन् ।
उनको समर्थक विश्वका बिभिन्न कुनामा रहेका छन् । अष्ट्रेलियामा कोहलीलाई निकै सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्छ । तर अचम्म लाग्न सक्छ कि धेरै भारतीय समर्थकहरु नै कोहलीलाई मन पराउदैनन् र सामाजिक सञ्जालै गाली गर्ने गरिआफ्नो घृणा पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।
१. भारतीय खेलाडीलाई नै स्लेजिङ गर्नु
कोहली यस्ता खेलाडी हुन् जो हर समय खेलमा सामेल हुन खोज्छन् । चाहे आफुले ब्याटिङ गर्दा होस या फिल्डिङ्ग गर्दा । उनी प्रत्येक समय आफ्नो बलहरुसँग कुरा गर्न पनि रुचाउँछन् । त्यति मात्र नभएर उनी अन्य टोलीका खेलाडीलाई चिढाउन र स्लेजिङ गर्न पनि पछि पर्दैनन् । प्राय दुई देशबीच खेल्दा यस्ता घटना देखिने गरे पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा क्रिकेटरहरुको यो आक्रमक रवैया कमै देखिन्छ ।
तर कोहली इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा पनि स्लेजिङ गर्न पछि पर्दैनन् । सन् २०१३ मा कोहलीको गौतम गम्भीरसँग नराम्रो झगडा नै परेको थियो । यसको परिणाम अहिले पनि गम्भिरले कोहलीलाई हटाएर रोहित शर्मा भारतको कप्तान बन्दा उचित हुने भन्ने दिदै आइरहेको अन्तर्वाता हो । हालै युएईमा सम्पन्न आईपीएलमा मनिष पाण्डे र सुर्यकुमार यादवलाई पनि उनले आफ्नो आक्रमक रुपले डोमिनेट गर्न खोजेका थिए ।
२. उपाधि जित्न नसक्नु
कोहलीले लगातार आठ बर्ष देखि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको कप्तानी सम्हाल्दै आएका छन् तर उनले एउटा पनि उपाधि आफ्नो फ्रेन्चाइजलाई दिलाउन सकेका छैनन् ।
उनको कप्तानीमा भारतले सन् २०१७ को च्याम्पियन्स ट्रफी र सन् २०१९ को विश्वकप खेले पनि उपाधि बिहिन बन्न पुग्यो । च्याम्पियन्स ट्रफीमा भारतले चिरप्रतिद्वन्दी पाकिस्तानसँग १८० रनको लज्जास्पद हारको सामना गरेको थियो भने विश्वकप सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डसँग १८ रनले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
मुम्बई इन्डियन्सका कप्तान रोहितले आफ्नो फ्रेन्चाइजलाई पाँच पटक उपाधि दिलाएका कारण धेरैले कोहलीलाई कप्तानीबाट हटाएर शर्मालाई कप्तानी दिन पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
३. भारतीय तरिका भन्दा भिन्न
कोहली आक्रमक कप्तान हुन् । तर भारतका पुर्व कप्तानहरु सचिन तेन्दुलकर, राहुल द्रविड र महेन्द्र सिंह धोनीसँगै रोहित शर्मा नम्र स्वभावका खेलाडी र कप्तान हुन् । भारतीयहरु आफ्नो देशका मानिसहरु नम्र स्वभावका रहेको मान्छन् । यसै कारण उनीहरु कोहलीले आफ्नो देशका मानिसहरु जस्तै नम्र नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् । धेरै समर्थक त कोहलीलाई भारतीय जर्सीमा अष्ट्रेलियन खेलाडी मैदान उत्रिरहेको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् ।
४. धेरै समर्थकहरुको प्रिय ब्याट्सम्यानको भन्दा कोहलीको प्रदर्शन राम्रो
कोहली अहिलेको पुस्ताका सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान हुन् भन्नेमा कुरामा कुनै द्विविधा छैन । चाहे टेस्ट होस्, एकदिवसीय अथवा ट्वान्टी ट्वान्टी, कोहलीको ब्याटबाट सधैं रन बन्ने गर्दछ ।
कोहलीले सबै ढांचामा गरेर २२ हजार भन्दा धेरै रन बनाइसकेका छन् भने आफ्नो नाममा ७० शतक लेखाइसकेका छन् । सचिनको १०० शतकबाट उनी मात्र ३० शतक टाढा छन् भने एकदिवसीयमा छ शतक मात्रा टाढा छन् ।
भारतीय समर्थकहरुले पछिल्लो समय धेरै ब्याट्सम्यानहरुलाई समर्थन गर्दै आइरहेका छन् । जुन किसिमले कोहलीले रन बनाउने गर्दछन् त्यो देख्दा दर्शकहरुले मन पराएका खेलाडी भन्दा राम्रो भएकै कारण पनि उनलाई
नरुचाउनेहरुको संख्या थुप्रै छ ।
भारतीय समर्थकहरु कोहलीलाई घमण्डी खेलाडीका रुपमा हेर्ने गर्दछन् । भारतलाई सन् २००८ को अण्डर–१९ विश्वकप जिताएका कोहलीले सानै उमेरमा भारतीय टोलीबाट खेल्ने मौका पाए ।
तर जस्तो व्यवहार कोहलीले मैदानमा देखाउने गर्दछन् त्यो हेर्दा सबै समर्थक उनलाई घमण्डी भन्ने गर्दछन् । त्यस माथि कोहलीको ट्याटु र उनले कानमा लगाउने मुन्द्राका कारण पनि समर्थकहरुले हेर्ने नजर नै अर्कै छ ।